Covid-19 ကူးစက်ခံရပြီးနောက် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာဖို့ ကြာမြင့်ချိန် | Page2| Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
Covid-19 ကူးစက်ခံရပြီးနောက် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာဖို့ ကြာမြင့်ချိန်
Covid-19 စတင်ကူးစက်ပြီး အစောပိုင်း ရက်သတ္တပတ်များမှာ ရောဂါလက္ခဏာတွေ ဘယ်အတိုင်းအတာထိ ခံစားရနိုင်ပြီး အခြေအနေ ဘယ်လောက်ဆိုးနိုင်သလဲဆိုတာကို ခန့်မှန်းရခက်ခဲပါတယ်။ အခုဆိုရင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပျံ့နှံ့နေတာ6လအတွင်းသို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တာမို့ ဆရာဝန်များနဲ့ လေ့လာသူတွေအနေနဲ့ ရောဂါရဲ့ ကြာချိန်နဲ့ သက်သာချိန်တို့ကို စူးစမ်းလေ့လာနေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ ရောဂါထိန်းချူပ်ရေးနဲ့ ကာကွယ်ရေးစင်တာ၏ လေ့လာမှုများအရ Covid-19 ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ကိုယ်ခန္ဓာထဲသို့ ဝင်ရောက်ပြီးနောက် ရောဂါလက္ခဏာများ ပြသဖို့အတွက် ၂ ရက်ကနေ ၁၄ ရက် ကြာမြင့်ပါတယ်။ ပျမ်းမျှအနေနဲ့ ၄ ရက်ကနေ ၅ ရက်လောက်မှာ စတင်ပြသတတ်ပါတယ်။ တချို့တလေမှာတော့ ၁၉ ရက်ထိ အချိန်ယူတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုအစပျိူးချိန်ကာလအတွင်းမှာ ရောဂါလက္ခဏာ မခံစားရသေးသော်လည်း မိမိဆီကနေတော့ သူတပါးကို ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
● လူတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်ထဲသို့ ဗိုင်းရပ်စ်ဝင်ရောက်ပြီး ၃ ပတ်ကြာသည့်တိုင်အောင် ဘာရောဂါလက္ခဏာမှ မခံစားရဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မသိလိုက်တာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။
● အချို့ကူးစက်ခံရသူများတွင် အစပိုင်းမှာ သာမန်တုပ်ကွေးလက္ခဏာများသာ ပြသပြီးနောက် ၅ ရက်ကနေ ၉ ရက်ခန့် အကြာတွင် ပြင်းထန်အဆင့်သို့ ကူးပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်။
● အတိုချုံးပြောရရင်တော့ ဗိုင်းရပ်စ်ဟာကိုယ်ထဲရောက်ပြီး ၂ ရက်လောက်နဲ့လည်း လက္ခဏာများ ပြသနိုင်သလို ၁၄ ရက်ထိလည်း ကြာမြင့်တတ်ပါတယ်။
● အချို့လူတွေမှာဆိုရင် ၃ ပတ်ကနေ ၆ ပတ် လောက်ကြာမှ လက္ခဏာပြတာမျိုးလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။
● သေဆုံးသွားသူတွေအနက် အချို့ဟာ လက္ခဏာများ စတင်ခံစားရပြီးနောက် ၂ ပတ်အတွင်းကနေ ၈ ပတ်လောက်မှာ နောက်ဆုံးအခြေအနေကို ရောက်ရှိကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့လူတွေမှာ ၁၀ ပတ်လောက်ထိလည်း ကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။
>> ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဗိုင်းရပ်စ် မရှိတော့တာ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ?
● Covid-19 ရောဂါလက္ခဏာများ ခံစားရပြီး တစ်ပတ်အတွင်း စစ်ဆေးသော swab test များတွင် Positive တွေ့ထားသူများအနေနဲ့ ရောဂါလက္ခဏာများ စတင်ဖြစ်ပေါ်ပြီး ၁၀ ရက်အကြာတွင် ပြန်လည်စစ်ဆေးရာမှာ Negative တွေ့ရှိရပါက ဗိုင်းရပ်စ်ကင်းစင်ပြီလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက္ခဏာများပြသပြီး ၃၇ ရက် ကြာတဲ့အထိ Positive ဖြစ်နေဆဲ ကေ့စ်များကိုလည်း တွေ့ရှိနေရဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
● မပြင်းထန်သော Covid-19 ကူးစက်ခံလူနာတွေရဲ့တစ်ဝက်ကတော့ ရောဂါလက္ခဏာများ ပျောက်ကင်းပြီးနောက် ၈ ရက်အထိ ကိုယ်ထဲမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို တွေ့ရှိရဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
● Negative အဖြေဟာ ရောဂါလက္ခဏာများ လုံးဝသက်သာသွားပြီဆိုတာကိုလည်း အာမခံချက် မပေးနိုင်ပါဘူး။
● Negative အဖြေထွက်ပြီးနောက်မှာတောင် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ ခံစားနေရသူတွေလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။
● Covid-19 ကာကွယ်ဆေးကို သိပ်မကြာခင်လများမှာ ရရှိနိုင်တော့မယ်လို့ မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ အနောက်နိုင်ငံကြီးတွေမှာ လက်ရှိစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများစွာ ပြုလုပ်လျက်ရှိနေပြီး မကြာခင်မှာ ကုသရေးအတွက် ဆေးဝါးတွေကိုလည်း ဖော်ထုတ်လာနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်နေကြပါတယ်။
Covid-19 စတင္ကူးစက္ၿပီး အေစာပိုင္း ရက္သတၱပတ္မ်ားမွာ ေရာဂါလကၡဏာေတြ ဘယ္အတိုင္းအတာထိ ခံစားရႏိုင္ၿပီး အေျခအေန ဘယ္ေလာက္ဆိုးႏိုင္သလဲဆိုတာကို ခန႔္မွန္းရခက္ခဲပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတာ6လအတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္တာမို႔ ဆရာဝန္မ်ားနဲ႔ ေလ့လာသူေတြအေနနဲ႔ ေရာဂါရဲ႕ ၾကာခ်ိန္နဲ႔ သက္သာခ်ိန္တို႔ကို စူးစမ္းေလ့လာေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။
အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ ေရာဂါထိန္းခ်ဴပ္ေရးနဲ႔ ကာကြယ္ေရးစင္တာ၏ ေလ့လာမႈမ်ားအရ Covid-19 ဗိုင္းရပ္စ္ဟာ ကိုယ္ခႏၶာထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ျပသဖို႔အတြက္ ၂ ရက္ကေန ၁၄ ရက္ ၾကာျမင့္ပါတယ္။ ပ်မ္းမွ်အေနနဲ႔ ၄ ရက္ကေန ၅ ရက္ေလာက္မွာ စတင္ျပသတတ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕တေလမွာေတာ့ ၁၉ ရက္ထိ အခ်ိန္ယူတတ္ပါတယ္။ ဒီလိုအစပ်ိဴးခ်ိန္ကာလအတြင္းမွာ ေရာဂါလကၡဏာ မခံစားရေသးေသာ္လည္း မိမိဆီကေနေတာ့ သူတပါးကို ကူးစက္ႏိုင္ပါတယ္။
● လူတစ္ေယာက္ဟာ ကိုယ္ထဲသို႔ ဗိုင္းရပ္စ္ဝင္ေရာက္ၿပီး ၃ ပတ္ၾကာသည့္တိုင္ေအာင္ ဘာေရာဂါလကၡဏာမွ မခံစားရဘဲ ကိုယ့္ကိုယ္ကို မသိလိုက္တာမ်ိဳးလည္း ရွိပါတယ္။
● အခ်ိဳ႕ကူးစက္ခံရသူမ်ားတြင္ အစပိုင္းမွာ သာမန္တုပ္ေကြးလကၡဏာမ်ားသာ ျပသၿပီးေနာက္ ၅ ရက္ကေန ၉ ရက္ခန႔္ အၾကာတြင္ ျပင္းထန္အဆင့္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားႏိုင္ပါတယ္။
● အတိုခ်ံဳးေျပာရရင္ေတာ့ ဗိုင္းရပ္စ္ဟာကိုယ္ထဲေရာက္ၿပီး ၂ ရက္ေလာက္နဲ႔လည္း လကၡဏာမ်ား ျပသႏိုင္သလို ၁၄ ရက္ထိလည္း ၾကာျမင့္တတ္ပါတယ္။
● အခ်ိဳ႕လူေတြမွာဆိုရင္ ၃ ပတ္ကေန ၆ ပတ္ ေလာက္ၾကာမွ လကၡဏာျပတာမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။
● ေသဆုံးသြားသူေတြအနက္ အခ်ိဳ႕ဟာ လကၡဏာမ်ား စတင္ခံစားရၿပီးေနာက္ ၂ ပတ္အတြင္းကေန ၈ ပတ္ေလာက္မွာ ေနာက္ဆုံးအေျခအေနကို ေရာက္ရွိၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕လူေတြမွာ ၁၀ ပတ္ေလာက္ထိလည္း ၾကာျမင့္ႏိုင္ပါတယ္။
>> ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ ဗိုင္းရပ္စ္ မရွိေတာ့တာ ဘယ္လိုသိႏိုင္မလဲ?
● Covid-19 ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ခံစားရၿပီး တစ္ပတ္အတြင္း စစ္ေဆးေသာ swab test မ်ားတြင္ Positive ေတြ႕ထားသူမ်ားအေနနဲ႔ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား စတင္ျဖစ္ေပၚၿပီး ၁၀ ရက္အၾကာတြင္ ျပန္လည္စစ္ေဆးရာမွာ Negative ေတြ႕ရွိရပါက ဗိုင္းရပ္စ္ကင္းစင္ၿပီလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လကၡဏာမ်ားျပသၿပီး ၃၇ ရက္ ၾကာတဲ့အထိ Positive ျဖစ္ေနဆဲ ေက့စ္မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရွိေနရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။
● မျပင္းထန္ေသာ Covid-19 ကူးစက္ခံလူနာေတြရဲ႕တစ္ဝက္ကေတာ့ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ေပ်ာက္ကင္းၿပီးေနာက္ ၈ ရက္အထိ ကိုယ္ထဲမွာ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးကို ေတြ႕ရွိရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။
● Negative အေျဖဟာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား လုံးဝသက္သာသြားၿပီဆိုတာကိုလည္း အာမခံခ်က္ မေပးႏိုင္ပါဘူး။
● Negative အေျဖထြက္ၿပီးေနာက္မွာေတာင္ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာလကၡဏာမ်ား ခံစားေနရသူေတြလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။
● Covid-19 ကာကြယ္ေဆးကို သိပ္မၾကာခင္လမ်ားမွာ ရရွိႏိုင္ေတာ့မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။ အေနာက္ႏိုင္ငံႀကီးေတြမွာ လက္ရွိစမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေနၿပီး မၾကာခင္မွာ ကုသေရးအတြက္ ေဆးဝါးေတြကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္လာႏိုင္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ေနၾကပါတယ္။
သွေးပြန်ကြောထုံးခြင်းမှ ကင်းဝေးစေရန် နည်းလမ်းများ
၁.၇.၂ဝ၂ဝ | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
1. ခြေထောက်များကို မြှောက်ထားပါ။
တစ်နေ့တာလုံး မတ်တတ်ရပ်ထားပါက ခြေထောက်များ အနည်းငယ် ရောင်နေတတ်ပါတယ်။ ထိုသို့ဖြစ်ပွားပါက ခြေထောက်တင်ရန် ခေါင်းအုံးတစ်ခု သီးသန့်ဝယ်ထားပါ။ အိမ်ပြန်ရောက်ပါက ခြေထောက်များကို ခေါင်းအုံးပေါ်တွင် တင်ထားနိုင်ပါတယ်။
၂၉.၆.၂ဝ၂ဝ | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
ပရိုတင်းဓာတ်မြင့်မားတဲ့ အစားအစာတွေဟာ ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေဖို့ အဓိက ကျကြောင်း လေ့လာမှုအသစ်တစ်ခုက အတည်ပြုထားပြီး ပရိုတင်းဓာတ်များတဲ့ အစားအစာတွေဟာ စားသုံးသူကို ပြည့်အင့်စေပြီး တော်ရုံနဲ့ ဗိုက်ထပ်မဆာစေတာကြောင့် ဝိတ်ကျစေဖို့ အထောက်အပံ့ဖြစ်စေတယ်လို့ Indiana ရှိ Purdue University မှ သိပ္ပံပညာရှင်တို့က ဆို...